इराकी सिया प्रार्थनास्थलमा भागदौड मच्चिँदा ३१ को मृत्यु – Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र २५, बुधबार १७:०९ [post-views]
बग्दाद । इराकी शहर कार्बालामा मङ्गलबार सिया मुसलमानहरूको प्रार्थनास्थलमा एक्कासी भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको इराकी अधिकारीले जनाएका छन्। उक्त घटनामा भागदौडका क्रममा कम्तीमा १०० जना घाइते भएका पनि बताइएको छ।
घटनास्थलबाट केही धर्माबलम्वीहरूलाई गम्भीर घाइते अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल पठाइएको प्रहरीले बताएको जनाउँदै घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या केही बढ्नसक्ने उनले बताए। कार्बालामा रहेको सिया मुसलमानको उक्त पवित्रस्थलमा हरेक बर्ष कसुरा पर्वका दिन आराधनाका लागि लाखौँ धर्माबलम्वी पुग्ने गर्छन्। कसुरा पैगम्बर मोहम्मदका नाती हुसैनको मृत्युको सम्झनामा गरिने प्रार्थनासभा हो।
हेर्नुहोस् कति छ आज नेपाली बजारमा सुनको मुल्य ?
किन आउँदैछिन् सन्नी लियोनी भोलि नेपाल ?
चर्चा बटुल्दै प्रमोद खरेलको पहिलो लोक दोहोरी गीत “विद्यानास” (भिडियो सहित)